Home / दुर्घटना (page 3)	दुर्घटना	लालमटियामा मोटरसाइकल दुर्घटना, दुई जना घाइते
243 Views फाइल फोटो
207 Views धरान /धरान –९ स्थित पुतलीलाईनमा अकस्मात आगलागि भएको छ । पुतलीलाईनमा रहेको कबिन बिक्री केन्द्र छेउमा रहेको छाप्रिबाट आगलागि सुरु भएको जनाइएको छ । आगो नियन्त्रण्मा लिन धरान उपमहानगरपालीकाका तिनओटा दमकल प्रयोग गरिएको छ । आगो नियन्त्रण गर्न प्रहरी र सर्बसाधरण समते जुटेको घटनास्थलमा रहेका हाम्रा सहकर्मि उपेन्द्र चाम्लिङले जानकारी दिएका छन् । आगलागिबाट थप क्षति हुन नदिन प्रयास भईरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।ग्यास लिक भएर आगोलागि भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अपडेटः धादिङ बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १७ पुग्यो ६ घाइतेलार्इ काठमाडाैं ल्याइयो
282 Views ११ असोज, धादिङ । धादिङको उत्तरी क्षेत्रको मार्पाक गाविसमा यात्रुबस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १७ पुगेको छ । घाइतेमध्ये ६ जनालार्इ उपचारका लागि काठमाडाैं ल्याइएको छ ।
सदरमुकाम धादिङवेसीबाट दार्खा गाविसको किन्ताङफेदी जाँदै गरेको ना ४ ख ३३१८ नम्बरको बस मार्पाक गविसस्थित लापाङ चौतारा नजिकै सडकबाट करीव ५०० मिटर तल खसेको थियो ।
दुर्घटनामा अहिलेसम्म १७ जनाको मृत्यु भएको धादिङका एसपी शरद खत्रीले जानकारी दिएका छन् । मृतकमध्ये पुरूष १३ र महिला ४ जना रहेको उनले बताए । मृतकको सनाखत हुन सकेको छैन ।
अनलाइनखवरसँग कुरा गर्दै एसपी खत्रीले दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकामध्ये ६ जनालार्इ डाइनेष्टिक एयरको हेलिकप्टरबाट उद्दार गरी काठमाडाैं पठाइएको जानकारी दिए ।
गम्भीर घाइते रहेका अन्य दुर्इ जनालार्इ लिन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाइएको उनले जनाए ।
एसपी खत्रीले भने, ‘बस २७ जना लिएर सदरमुकामबाट छुटेको रहेछ, बाटाेमा केहि यात्रु थपिएको हुनसक्छ ।’
दुर्घटनास्थलमा अहिले शव संकलन कार्य भइरहेको छ ।
मंगलबार बिहान ७ बजे धादिङबेसीबाट छुटेको बस बिहान साढे ११ बजे दुर्घटनामा परेकाे प्रहरीले जनाएको छ ।
कच्ची बाटो र क्षमताभन्दा बढी यात्रुका कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
उद्धारमा खटिएका स्थानीयका अनुसार मृतकको संख्या अझै बढ्नसक्ने छ । दुर्घटनास्थलमा केहिबेर अघिमात्र प्रहरी पुगेको थियो ।
नवलपरासी मा सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइते
189 Views १० असोज, नवलपरासी। नवलपरासीको मध्यविन्दू नगरपालिका ७ चोरमारा जँगल सोमबार दिउँसो भएको सवारी दुर्घटनामा परी एक जनाको ज्यान गएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् ।
घाइते ६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका अनुसार मध्यविन्दु नगरपालिका ७ चोरमारा जंगलमा पूर्वबाट पश्चिम जांदै गरेको लु १ ख ६९ ३३ न. को बस अनियन्त्रित भई रोकिराखेको ना ४ ख ५०१० नम्बरको ट्रकसँग ठक्कर खांदा दुर्घटनामा परी एक जनाको घटना स्थलमै मृत्यु भएको हो ।
दुर्घटनामा परी बारा जिल्लाको तेराकट्टी बस्ने २५ बर्षीय संदिप शर्माको घटना स्थलमा नै मृत्यु भएको हो ।
दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका नवलपरासीको वेनिमणिपुर सर्दी निवासी ६० बर्षीय खेमबहादुर चौधरी, दुम्किबास ५ निवासी ४८ बर्षीया रुपा परियार, अर्घाखाची निवासी २५ बर्षीय दिनेश मरासिनी, चितवनको भरतपुर उपमहानगरपालिका निवासी २६ बर्षीया सलिना गुरुङ र रुपन्देहीको खैरहनी निवासी ३१ बर्षीया अनिता सुनारको भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ ।
बस र ट्रक चालक प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
एउटा ‘गल्ती’ ! जसले पूर्वगृहमन्त्री घिमिरेको गाडी त्रिशूलीमा खस्यो तीन जनाको मृत्यु, घिमिरेसहित तीन अझै वेपत्ता
2,273 Views काठमाडौं, ९ असोज । आइतबार साँझ ५ बजेतिर त्रिशूली नदीमा पूर्व गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे चढेको गाडी खसेर वेपत्ता भयो ।
गाडीमा सवार ७ जनामध्ये तीनको मृत्यु भइसक्यो । दुई भाईसहित घिमिरे अझै वेपत्ता छन् । जीपबाट उछिट्टिर बाँच्न सफल चालक अस्पतालमा छन् ।
पूर्वमन्त्री घिमिरे आफ्नी ८० वर्षीया आमा चैत्यकुमारीलाई मुक्तिनाथ धामको तीर्थाटन गराएर आइतबार काठमाडौं फर्किने बेला यो दुर्घटना भएको हो ।
कसरी भयो दुर्घटना, यसो भन्छन् हाम फालेर बाँचेका चालक
त्रिशुलीमा खसेको जीपबाट उछिट्टिएर बाँच्न सफल भएका घिमिरेका चालक बिष्णु राईले आफूले नै प्रहरीलाई सबैभन्दा पहिले दुर्घटनाको खबर गरेको बताए ।
दुर्घटना हुनु अगाडिको अवस्था उनले यसरी सम्झिएः
मुक्तिनाथ धामबाट फर्किदा जीप मैले चलाएको थिए । दमौली पुगेर केहीबेर रोकिएपछि उहाँ (घिमिरे)ले मलाई ‘तिमी थाकेका छौ, केबलकारसम्म म चलाउँछु, अनि तिमी चलाउनु’ भन्नुभएको थियो तर, केबलकार अर्थात कुरिनटार नपुग्दै गाडी त्रिशुलीमा खस्यो । केबलकार चढ्ने ठाउँ आउन एक–दुई किलोमिटर छ भने जस्तो लाग्छ, त्यसपछि गाडी कसरी उछिट्टिएर गयो केही पनि थाहा पाइँन ।
हुन त हुने कुरा टारेर टर्दैन् भन्छन् । पूर्वमन्त्री घिमिरेको हकमा पनि त्यही भएको छ । यदि घिमिरेले चालकलाई गाडी हाक्न दिएको भए सायद यो घटना नहुन सक्थ्यो । तर, उनले आफै गाडी चलाए र दुर्घटनामा परे । धेरैले यसलाई उनको ‘गल्ती’का रुपमा हेरेका छन् ।
ज्योतिष भन्छन्- तिर्थयात्राको समय गलत
पूर्वमन्त्री घिमिरेको दुर्घटनाबारे चर्चित ज्योतिष सुनील सिटौलाले तिर्थयात्राको समय गलत भएको कारण देखाएका छन् । उनले भनेका छन्– ‘तिर्थयात्रा सम्पन्न गरीआउँदा पूर्व मूख्यसचिव एवं पूर्वमन्त्री माधवघिमिरे दुर्घटनामा पर्नुभयो । गुरुअस्तको समयमा तिर्थयात्रा गर्नु हुँदैनथ्यो ।’
गाडीमा को–को थिए ?
चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी बसन्त कुँवरका अनुसार जीपमा सात जना सवार थिए । ती यसप्रकार छन् ।
पूर्वमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे (वेपत्ता)
आमा ८० वर्षीया चैत्यकुमारी घिमिरे (मृत्यु)
अंगरक्षक रामचन्द्र कार्की (मृत्यु)
भान्जा नारायणप्रसाद काफ्ले (मृत्यु)
प्रकाश घिमिरे (वेपत्ता)
मोहन घिमिरे (वेपत्ता)
चालक विष्णु राई (अस्पताल)
दुर्घटनास्थलमा नदीको दुवैपट्टी पानीले भरिएकाले खोजी कार्य कठिन भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका सात जनाको गोताखोर टोलीले साँझदेखि डुङ्गामा बसेर बेपत्ता व्यक्ति र गाडीको खोजी कार्य गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्र कुरिनटारका प्रहरी नायब उपरीक्षक जनक बस्नेतले बाटोबाट ‘लाइटिङ टावर’बाट उज्यालो दिने व्यवस्था गरेर खोजी कार्य जारी राखेको बताए । टावरले चार किलोमिटर परसम्म उज्यालो दिने उनले बताए ।
विसं २०६६ साउन २२ गतेदेखि २०६९ साउन २१ गतेसम्म मुख्यसचिव भएका घिमिरे खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा गृह तथा परराष्ट्र मन्त्री थिए ।
माधव घिमिरेका चालकको बयानः दमौलीबाट तिमी थाक्यौ, केबुलकारसम्म म गाडी चलाउँछु भन्नुभयो आमालाई मुक्तिनाथ धामको तीर्थाटन गराएर फर्किँदै थिए पूर्वमन्त्री घिमिरे
3,622 Views ९ असोज, काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे आफ्नी ८० वर्षीया आमा चैत्यकुमारीलाई मुक्तिनाथ धामको तीर्थाटन गराएर आइतबार काठमाडौं फर्किँदै थिए ।
हिन्दू धर्माबलम्बीहरुका प्रमुख चारधाम मध्ये मुस्ताङको मुक्तिनाथ एक हो । स्कारपियो जीपमा आमा र आफन्त लिएर गएका घिमिरेसँग गाडी चालक पनि थिए ।
त्रिशुलीमा खसेको जीपबाट उछिट्टिर बाँच्न सफल भएका घिमिरेका चालक बिष्णु राईले नै प्रहरीलाई सबैभन्दा पहिले दुर्घटनाको खबर गरेका थिए । उनले भने- दमौलीदेखि गाडी उहाँले चलाउनुभएको थियो ।
घिमिरेको भनाइ सम्झिँदै चालक राईले भने- केबलकार चढ्ने ठाउँ आउन एक/दुई किलोमिटर छ भने जस्तो लाग्छ, त्यसपछि गाडी कसरी उछिटिएर गयो केही पनि थाहा पाइँन ।